Anionic Polyacrylamide emepụta na suppliers | Oubo
Industrylọ Ọrụ Ọgwụ Mmiri
Pulp & Akwụkwọ Mmeputa
Fieldlọ ọrụ Mmanụ Ala
Industrylọ Ọrụ Ngwuputa
Anionic Polyacrylamide bụ mmiri-soluble Polymers nke bụ unyi anaghị agbasa na ọtụtụ organic solvents, Ọ na-egosi elu polima electrolyte e ji mara na-anọpụ iche na alkaline ase. Ezi flocculation, ọ pụrụ ibelata frictional eguzogide n'etiti mmiri mmiri na ike ọtụtụ-eji na Ngwuputa ụlọ ọrụ na na mmiri ọgwụ wdg
(1) Dị ka a flocculating gị n'ụlọnga, tumadi ji na ulo oru siri ike-mmiri mmiri nkewa usoro, gụnyere mmezi, dokwuo anya, uche na sludge dewatering Filiks. Ngwa maka niile bụ isi ndi nwere: Urban nsị Ọgwụgwọ, Akwụkwọ, Food Nhazi, Petrochemical, Metallurgical Nhazi, Dyeing na Sugar na ụdị nile nke ulo oru wastewater ọgwụgwọ.
(2) Na akwụkwọ ụlọ ọrụ ike ga-eji dị ka akọrọ ike mmadụ, njigide gị n'ụlọnga, nyo enyemaka. Ha nwere ike ukwuu mma dị ka akwụkwọ quality, welie nkịtị ike nke akwụkwọ ma belata ọnwụ nke eriri, nwekwara ike-eji na ọgwụgwọ nke na-acha ọcha mmiri n'otu oge, na deinking usoro nwere ike egwu a dị ịrịba flocculation.
(3) na Ngwuputa, coal Ngwuputa ụlọ ọrụ ike ga-eji maka n'efu mmiri, coal saa n'efu mmiri clarifier.
(4) Oil ubi profaịlụ ịchịkwa na mmiri- ịkwụnye gị n'ụlọnga, ekwekọghị na CMC na a ụfọdụ ego nke chemical nyagide kwukwara. Ọ ga-eji dị ka mmanụ ubi profaịlụ ọchịchị na mmiri-ịkwụnye n'ụlọnga. Nwekwara ike-eji apịtị mmako maka EOR (enwekwukwa Oil Recovery) usoro ka mma mmepụta nke mmanụ gas mkpọpu ala chemical. Na mmanụ ubi, dị ka ụdị nke apịtị nwekwara. Dịkwuo viscosity nke mmiri ma melite arụmọrụ nke mmiri idei mmiri usoro.
Previous: Polyacrylamide Nonionic
Next: Polyacrylamide Cationic
Anionic Polyacrylamide Tech mezuwo
805Room, No.13, B Mpaghara, Wanda mansion, Qingdao, Shandong Province
Ọrụ nke flocculant na nsị mmiri
Nkọwa nke eji nke polyacrylamide na t ...
Ngwa nke Polyelectrolyte na Obodo ...
Ngwa nke Polyacrylamide na ntinye
Esi amata ụdị ion nke polyacryl ...
Copyright 2011-2020 Oubo Chemical Ikike niile echekwabara.